Ukubukela kweApple kunceda ukuhambisa ngenqwelomoya ngenqwelomoya | Ndisuka mac
Sele kukho abantu abambalwa abatyala ubomi babo Apple Watch. Mna ngokwam ngendingasaphili, ukuba iApple Watch yam ibingandivusanga ngesilumkiso esisezantsi ngale ntsasa xa intliziyo yam ibetha kwiibhithi ezingama-25 ngomzuzu.
Namhlanje sichaza indlela abayisebenzise ngayo iApple Watch kwifayile ye- ukuhanjiswa kwangaphambi kwexesha eyothusayo embindini wenqwelomoya ehamba ngenqwelomoya. Isixhobo sisebenza ukulawula ukubethelwa kosana, xa sele luzelwe.
URaymond Mounga wazalwa Iiveki ze11 ngaphambi kweshedyuli yenqwelomoya yeDelta esuka eSalt Lake City, e-Utah, eya e-Honolulu, eHawaii, ngo-Epreli 28. Umama wakhe, uLavinia Mounga, waya kubeleka phakathi kwenqwelomoya.
Bobabini umntwana nonina babenethamsanqa, njengoko ugqirha nabongikazi abathathu babekhwele, kwaye bangena kwisenzo ukuya kuziswa gcina usana luzinzile de kufike inqwelomoya eHawaii.
El UGqirha Dale Glenn, ugqirha wosapho eStraub Medical Centre, wanceda abongikazi ukuzisa usana emhlabeni, kwaye wayila isicwangciso esingxamisekileyo sokugcina usana olusandul 'ukuzalwa luzinzile emva kokubeleka, de angabinakho ukungena kwi-incubator yeentsana ezizelwe ngaphambi kwexesha.
UGlenn uphawule emva kokwehla kwakhe kwinqwelomoya ukuba izixhobo ezikwibhodi bezingonelanga ukukhathalela umntwana ngaphambi kwexesha, owazalwa eneeveki ezingama-29 endaweni yeeveki ezingama-40 zesiqhelo. Ke baphucule ukufudumeza ukugcina iqondo lobushushu lomntwana kunye neebhotile zokufudumeza ezazikwimicrowave. Baye basebenzisa i- Apple Watch Ukujonga ukubetha kwentliziyo yosana olusandul 'ukuzalwa, ngelixa ubeka inqwelomoya.
Emva kokufika, umama nosana bahanjiswa ukhuselekile kwaye inesandi kwiziko lonyango laseKapiolani, apho uRaymond kuyakufuneka achithe iiveki ezimbalwa kwisifukamisi kude kube bobabini begoduka. Iindaba ezimnandi ezinesiphelo esihle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Watch inceda ekuhanjisweni ngexesha lokuhamba ngenqwelomoya